မီးသွေး၏အကျိုးကျေးဇူးများ - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » ကနျြးမာရေးသတင်းများ • အကြံပြုချက်များ • အကြံပြုချက်များ Sant "မီးသွေး၏အကျိုးကျေးဇူးများ
အဆိုပါ activated မီးသွေးခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လို့အဆိပ်ဖြေပေးပါတယ်နှင့်အစာခြေခြင်းနှင့်အူလမ်းကြောင်းပြဿနာများကုစားဖို့အလွန်ထိရောက်သောအဖွားတစ်ဦးအဟောင်းဆေးတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုက်သည်အတိုင်းအပြစ်ပေးသို့ကျဆင်းသွားသောကြောင့်, သုံးစွဲဖို့ရိုးရှင်းတဲ့စျေးသိပ်မကြီးတဲ့အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဂုဏ်သတ္တိများနှငျ့အတူရှိ၏။
၎င်း၏အမြင့်ဆုံးထိစိမ့်စွမ်းရည်အဘို့အကျော်ကြားသည်မီးသွေးအရှိဆုံးတက်ကြွသဘာဝအ detoxifying ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသူ့ရဲ့ detoxifying နှင့်စင်ကြယ်စေဂုဏ်သတ္တိများအဘို့အကျော်ကြားသည်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်မူရင်း 100% ကထိုကဲ့သို့သောသစ်သားအဖြစ်မြင့်မားတဲ့အပူချိန်စက်ရုံအကြွင်းအကျန်မှာ calcination ၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။ အထိရောက်ဆုံးအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရည်အသွေးကျောက်မီးသွေးပေးသောအုန်းသီးခွံ၏မီးလောင်ရာမှဆင်းသက်လာသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ များမှာမီးကျွမ်းနေပြီးတပြိုင်နက်ထိုအပင်သူတို့ကိုတစ်ဦးအထင်ကြီးကိုစုပ်ယူပေးသော, သန့်နှင့်စိမ်ပြန်ဆိုဖြစ်ကြသည်။
အတော်များများကသိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုများမီးသွေးကိုခန္ဓာကိုယ်မှအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်အဆိပ်နှင့်အဆိပ်စုပ်ယူကြောင်းသက်သေပြခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာဖြစ်နိုင်ပိုးမွှားလျော့ကျစေအေးဂျင့်အရိုးရှင်းဆုံးနှင့်ထိရောက်မှုအရှိဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမိုးသည်းထန်စွာသတ္တု (ပြဒါး, ခဲ), ဟိုက်ဒရိုကာဘွန်, chloride နှင့်စုပ်ယူ ပိုးသတ်ဆေး ဒါပေမယ့်လည်းဒြပ်ဟော်မုန်းများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများ။ ဒါဟာအစအခြို့သောအပင်များ, အင်းဆက်ပိုးမွှား Venom သို့မဟုတ်မြွေ, ဒါမှမဟုတ်အချို့ဘက်တီးရီးယား (staphylococcus, salmonella), နှင့်ပင်အချို့ဗိုင်းရပ်စ်များကထုတ်လုပ်သည့်အဆိပ်ဖမ်းယူ။ အနုတ်လက္ခဏာညစ်ညမ်းမှုအိုင်းယွန်းခိုင်မြဲစွာကျောက်မီးသွေးနှင့်အဆုံးထောင်ချောက်၏မျက်နှာပြင်မှပူးတွဲ။
activated ကာဗွန်အထူးသဖြင့်ဖောင်း, လေနှင့်အူလမ်းကြောင်းနာကျင်မှုဆန့်ကျင်သည်၎င်း၏ထိရောက်မှုဖြစ်သည့်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်အတွက် 100 ကြိမ်သူ့ရဲ့အသံအတိုးအကျယ်အနီးကိုစုပ်ယူနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ဤအအူလမ်းကြောင်းမအီကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့, သင်ကောင်းစွာဖြစ်ခြင်းရှာဖွေ ပြားချပ်ချပ်အစာအိမ်.
အလှကုန်မှာ, မျက်နှာဖုံးများအတွက်တက်ကြွစွာအဖြစ်အသုံးပြုပါသည်, ပွတ်တိုက်, အညစ်အကြေးများနှင့်ညစ်ညမ်းမှုဖယ်ရှားပစ်ရန်ဆပ်ပြာနှင့်သန့်စင်။ စင်ကြယ်စေ, ကရသောအခါဝက်ခြံပြဿနာများကြောင့်ရောင်ဝက်ခြံ၏အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချ, အရေပြားဆေးကြောခြင်းနှင့်အချို့သောရောဂါပိုးများအတွက်ဘက်တီးရီးယားတာဝန်ရှိစုပ်ယူ။ အူထဲမှာရှိသကဲ့သို့, ကအရေပြားမျက်နှာပြင်ပေါ်စုပြုံကြောင်းညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်အဆိပ်ကိုယူလိုက်တယ်: အလှကုန်ကနေသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်း, ဓာတုအကြွင်းအကျန်ဒါပေမယ့်လည်းအသားအရေကထုတ်လုပ် toxins ။
တစ်ပါတ်ကိုတစ်ကြိမ်ပဲရန်သင့်သွားများနိန်ရှေ့တော်၌ထိုသွားတိုက်ဆေးအပေါ် activated ကာဗွန်တစ်နည်းနည်းထပ်ထည့် သဘာဝကျကျသင့်ရဲ့အံသွားအောငျ။ သင်တို့သည်လည်းထို့နောက်သင့်အံသွားပွတ်နယ်မလျှောက်ထားမီကတစ်စိုစွတ်ကြ၏ဝါဂွမ်း swab နှစ်ပြီးလျှင်, ခွက်သို့အခြို့သောမီးသွေးအမှုန့်လောင်းနိုင်။ ထို့နောက်ပုံမှန် Brush နှင့်အတူရှေ့ဆက်ပြီးတောက်ပတဲ့အဖြူရောင်ရရှိရန်သုတ်ခြင်း ..
သတိပေးခြင်း! ယင်း၏ကိုစုပ်ယူ puissantl ဖြစ်သကဲ့သို့တစ်ပြိုင်နက်မျိုချမိပါလျှင်, မီးသွေးပဋိသန္ဓေတားဆေးနှင့်ပဋိဇီဝဆေးများကဲ့သို့အခြို့သောဆေးဝါးများ၏ထိရောက်မှုကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာမီးသွေးကိုအနည်းဆုံးနှစ်နာရီအောင်နှင့်အတူဆေးဝါးရွှေ့ဖို့ သာ. ကောင်း၏။